musha Europe Vatambi veBasketball Kristaps Porzingis Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Iyo Biography yaKristaps Porzingis inotaurira Chokwadi nezve yake yehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu Hwemhuri, Musikana / Wife kuva, Net Kukosha, Mararamiro, uye Mararamiro.
Muchidimbu, tinokupa kuongororwa kwakadzama kwezviitiko kubva achiri mudiki, kusvika pakuzivikanwa. Tarisa uone matangiro nekusimuka kweNBA nyeredzi - imba yakanaka yeKristaps Porzingis Bio.
Kristaps Porzingis Biography - Tarisa Hupenyu Hwake hwepakutanga uye Kukura Kukuru.
Ehe, isu tinotenda mutambi weLatvia basketball mutambi nekugona kwake kwemitambo padare uye ne nguva dzose achiita napose paanogona napo kufadza mafeni.
Kunyangwe iri rumbidzo, vashoma chete ndivo vanoziva nezvenhoroondo yehupenyu hwake. Ndozvatinazvo kwauri, uye pasina kumwe kuwedzera, ngatitangei.
Kristaps Porzingis yehucheche nyaya:
Kune ekutanga maBiography, iye ane mazita ekuremekedza 'Unicorn'. Kristaps Porzingis akaberekwa pa2nd yaAugust 1995 kuna amai vake, Ingrīda Porziņģe, uye baba, Talis Porzingis muLatvia, nyika iri kuchamhembe kweEurope.
Tarira, wekutanga wemwana pikicha yeiyo 7 ft 3 ngano panguva yaaisaziva nezve ramangwana rake.
Kristaps Porzingis muHsi Mazuva Ekutanga.
Kristaps Porzingis Mhuri Yako:
Waizviziva?… Rudo rwake pamitambo rwakagara rwuri musimboti wemba yake. Semunhu anovhundutsa, vabereki vaKristaps Porzingis vese vaive neruzivo rwekutamba mutambo weBasketball vachiri vadiki.
Baba vake Talis, akambopedza semi-nyanzvi munhandare yemitambo asati ave mutyairi webhazi.
Kristaps Porzingis 'mum anga akambove kuLatvia vakadzi vechidiki nyika bhasiketi timu. Zvakare, tisingatauri mukoma wake mukuru, Jānis Porziņģis.
Muchidimbu, tinogona kuti anobva kumhuri yakabudirira inoisa mararamiro avo akatenderedza hoops.
Sangana nenhengo dzeKristaps Porzingis Mhuri.
Chii chimwe chaungatarisira kumwana ane vabereki vakambofanana naye? Sezvakasimbiswa nevezvenhau, akazvarwa murudo nezvaanoita paNBA kubva pazera ramakore matanhatu.
Asati aberekwa, amai vake (Ingrīda Porzinge), vaive nemukoma mukuru wepedyo anonzi Toms. Zvinosuruvarisa, akafa aine mwedzi gumi nemana.
Kubva panguva iyoyo inorwadza, hupenyu hwaKristaps hwakatanga kurongwa aine tarisiro dzepamusoro dzemhuri pamapfudzi ake.
Mhuri yaKristaps Porzingis yaiziva kuti aifanira kuzviraramira iye nehama yake yakarasika, Toms. Tarira, ramangwana NBA nyeredzi inoita kunge isingamanikidzwe neramangwana.
Pamakore gumi nemaviri, munin'ina wake wedangwe, Jānis Porziņģis, zvakare mutambi webhasikiti, aizoenda naye kumisangano yemwaka. Ikoko, akatamba mumakwikwi evechidiki.
Blake Griffin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Pakutanga, Kristaps yakanakisa kubatana kweziso-kweziso uye nhanho yepamusoro yekutarisisa yakamusiyanisa kubva kune vezera rake.
Kristaps Porzingis Mhuri Kubva:
Kungokuzivisa iwe, guta rake rekuzvarwa, Liepāja rinozivikanwa kuve rechitatu pakukura muRepublic yeLatvia. Iri kumadokero kwechikamu chenyika, mudunhu reKurzeme uye kuNorthern Europe.
Kristaps Porzingis Dzidzo:
Kune mukomana mudiki, dzidzo yepamutemo yanga isiri yekutanga. Ichi chaive chinzvimbo chakabatwa naIngrīda naTalis, vabereki vake.
Kunyangwe zvaisungirwa kuenda kuchikoro, basketball yaigara ichitora yakawanda yenguva yake uye nguva. Nekudaro, iyo yemberi 7-tsoka-3 Latvia yakave nemvumo naamai vake nababa kune yakasanganiswa chikoro nemitambo.
Ipo Kristaps achienda kuGrobiņa chikoro chesekondari, iye achiri kuyedzwa kuti aite zvakawanda zvekuenda kumatare ebasketball pane kudzidza. Liepaja wekutanga jimunasiyamu nedare reSailors Club ndiyo yaainyanya kufarira apedza chikoro.
Semukomana, aidzidzira kashanu pasvondo, kusanganisira kuve nemitambo pakupera kwevhiki. Munguva yezhizha, akaenda kumisasa yebhasikiti nevakoma vake, Martins naJanis.
Kristaps Porzingis Biography - Isingazivikanwe Basketball Nyaya:
Kubva pamazuva ake echikoro, iro basa reLiepāja rekuzvarwa rakanga ratora - kutanga mumigwagwa. Kamwe pane imwe nguva, ramangwana rakabatana nechinangwa chake, uye heino nyaya.
Paaive achitamba kuchikwata chekumusha kwake, mumiriri akamubata achinyura pfuti dzinoverengeka kubva pakadzika. Zuva iro, Kristaps anonyemwerera aive nemagumo ake akanamwa.
Mumiriri-akatumwa naMwari, nekuda kwekunakidzwa, akatanga kutumira mavhidhiyo emudiki uyu kuzvikwata zvikuru zvebhasikiti kuSpain neItaly.
Mufaro wemhuri yaKristaps Porzingis waisaziva muganho panguva iyo Baloncesto Sevilla (kirabhu yebhasikiti) kuSpain akamudaidza kumatare. Mushure mekupfuura, mukoma mukoma Jānis Porziņģis vakamuperekedza apo ivo vaviri vakarongedza mabhegi avo.
Kristaps Porzingis Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Nehurombo, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumukomana mudiki mumazuva ake ekutanga kuSpain. Achangosiya vabereki vake nenhengo dzemhuri kuSpain, akatanga kuona zviratidzo zvekushaya ropa.
Porzingis akatonetseka kutaura nevarairidzi maererano nekutsanangura matambudziko ake.
Kunyangwe kutya kwemhuri zvine chekuita nezvehutano hwake, Porzingis akaramba achitsungirira uye akazviratidza zvakanaka kune vechidiki timu. Akatanga kutamba zvine hunyanzvi mu2012, uye mumwaka wa2013-14, Kristaps anga atove murume ane nyeredzi muchikwata chekutanga cheSevilla.
Muna Kubvumbi 2014, Porzingis akazivisa kunyorwa kweNBA asi akazobvisa zita rake. Imhaka yekuti mhuri yake yakanga yamuraira kuti adzokere kuEurope kunorwira mubairo weEuro-Cup Rising Star, waakawana mwaka iwoyo.
Kristaps Porzingis Bio - Iyo Yekubudirira Nyaya:
Neraki, NBA yakauya ichigogodza zvakare. Iyo zuva - Chikumi 25, 2015, yakaona kuzvarwa kwenguva nyowani kwaari sezvo ivo vakamusarudza iye wechina muhuwandu hweNBA kunyorwa neNew York Knicks.
Pa 21 yaNovember 2015, Porzingis akave wekutanga ane makore makumi maviri okuberekwa kubvira Shaquille O'Neil kuposita anoshamisa makumi maviri (24) mapoinzi, manomwe akavharirwa pfuti, uye gumi nematanhatu vachipesana neHouston Rockets.
Zvekare, akazove mutambi wepamusoro weLatvia neBaltic munhoroondo yeNBA - inguva inodada yemhuri yake. Tarisa uone nyeredzi mukomana achipemberera kuhwina kweakakurumbira NBA hunyanzvi dambudziko
WeLiepāja akaberekerwa akapedza makore mashoma neNew York Knicks, kwaakawana Rise yekumira asati azviisa kuDallas Mavericks munaNdira 31, 2019.
Kukirabhu, iye, pamwe chete Luka Dončić, yakava imwe yemasimba akanyanya kunaka muNBA.
Panguva yekunyora Kristaps Porzingis Biography, isu tinomuziva kuti ave neakawandisa musanganiswa wematarenda (anozvidzivirira uye anotyisa) aine zvombo zvinoverengeka mudura rake.
Ivo 7 tsoka 3 murume akabhadhara mari yake kukondinendi yeEurope, senge Giannis Antetokounmpo. Vamwe vese, kusanganisira vhidhiyo yake inosimbisa pazasi, ichagara iri nhoroondo.
Kristaps Porzingis Kufambidzana, Musikana, Mukadzi?
Pane imwe nguva, zvakava nerunyerekupe rwekuti aifambidzana naAbigail Ratchford, mutambi, uye modhi. Nekudaro, hupenyu hwake hwerudo hwakawedzera kujeka sezvo takaona Dallas Mavericks superstar nemusikana wake.
Iye muenzaniso we Instagram uyo anoenda anonzi Bambi. Harisi zita rakashata, handiti?… Heuno Kristaps Porzingis nemudiwa wake anogona kunge ari mudzimai wake.
Kristaps Porzingis Hupenyu Hwemhuri:
Pasina kukahadzika, anokoshesa imba yake uye anovaita pekutanga. Muchikamu chino, tinokanda mwenje wakawanda kunhengo yega yega yemhuri yake. Zvino ngatitangei nevabereki vake.
Ona kuti mhuri yaKristaps Porzingis inopemberera sei Kisimusi seyuniti.
Nezve Kristaps Porzingis Baba:
Super Baba Tālis anonyanya kuzivikanwa semutyairi webhazi uyo akazopinda mune Basketball semi-nyanzvi.
Kupindira kwababa vaKristaps Porzingis mumitambo kwakakonzera kushuva kwaro kuvanakomana vavo. Heano Talis Porzingis ari mumakore ake makumi manomwe.
Septuagenarian akaroora Ingrīda, uye vese vane vana (4) vana, kunyangwe mumwe akarasika achiri mucheche.
Nezve Kristaps Porzingis 'Amai:
Kufanana nemurume wake, Ingrīda akatambawo basketball. Akatamba nechikwata chechidiki chenyika yake. Kutenda kuzvipira kwake, iye akazoshanda muLatvia yenyika yebhasikiti hofisi.
Iyi feat yakavezwa nzira yekuti vanakomana vake vave nebhasikiti-sekurerwa. Tarisa, nyeredzi yeNBA naamai vake, Ingrīda Porzinge. Isu tinoona kuti vese amai nemwanakomana vanoonekwa vari padhuze.
About Kristaps Porzingis Hama:
Mutambi webhasikiti weLatvia ane mukoma munin'ina uyo anoenda sainzi Janis Porzingis. Waizviziva?… NdiJanis akatanga kudzidza basketball mumhuri. Akaratidza kufarira kukuru kukura kwemukoma wake.
Munguva yaKristaps Porzingis hudiki uye kusvika parizvino, Janis achiri kushanda semurairidzi wake. Mukoma mukuru akaita zvese zvaaigona kuti ave nechokwadi chekuti munin'ina wake anobudirira mumutambo.
Heano mukuru weKristaps mukoma uye chipangamazano, Jānis.
Muchiitiko iwe waisaziva, Janis Porzingis aimbove nyanzvi bhasiketi mutambi. Akambotamba yeCroatia A-1 Liga timu KK Sibenik. Iwe wakasiya basa Basketball mu2015 mushure memakore maviri achitamba kusanaya kwemvura.
Waizviziva here?… Kristaps ane mumwezve munin'ina anonzi Martins, uyo zvakare, anofarira kutamba mutambo. Chekupedzisira asi chisiri chidiki, mukoma wake anonzi Toms akafa mwedzi gumi nemana mushure mekuzvarwa.
Kristaps Porzingis Hupenyu hweMunhu:
Kure kubva pabasa rake, ndezvipi zvimwe zvaunofunga kuti pro weLatvia anofarira? Chikuru, Porzingis anoda kutarisa nekutamba nhabvu. 'Sevilla FC,' 'Real Madrid CF' uye timu yake yekumba 'FK Liepaja' mamwe emakwikwi ake enhabvu.
Kristaps Porzingis Mararamiro:
Mudiki 7-tsoka-3-inch mutambi weLatvia akadzikama uye hunhu hunotonhora-hunodzivirira hunovhenekera. Kristaps hupfumi, zvisinei, aigona kumupa iye yakasarudzika mota, kunyangwe iyo Rolls Royce nedzimba.
Ona Kristaps Porzingis imba.
Zvinozivikanwa kuti Kristaps anowana yakawanda kubva kune rake nyanzvi bhasiketi basa. Sezvo muna 2020, Porzingis anoita madhora zviuru makumi maviri nemazana mashanu emadhora kubva kubvumirano yake yazvino yeKnicks uye $ 20.5 mamirioni kubva kuzvibvumirano zvake.
Nekuda kweizvozvo, iye ari 80th yakabhadharwa-yepamusoro pamberi uye iye 197th akabhadharwa-akabhadharwa NBA mutambi.
Kristaps Porzingis anoisa mari yakakosha muZing Bars.
Chibvumirano cheLatvia, kusanganisira zvese zvinhu zvaainazvo nezvivakwa, zvinoita kuti mambure ake akakosha kuve madhora zviuru makumi matanhatu emadhora (zvimisikidzwa zve60).
Kristaps Porzingis Chokwadi Chokwadi:
Chokwadi # 1: Matambudziko Ekurapa:
Kristaps akaonekwa kamwechete kwekushaya ropa; aive nemasero matsvuku eropa mashoma. Chirwere chakamuita kuti anzwe kufema kwekufema, kuneta, uye zvakare kutadza kurovedza muviri.
Nerubatsiro rweanodya chikafu, iye zvishoma nezvishoma akakunda mamiriro uye akaona kuvandudzwa mumutambo wake.
Chokwadi # 2: Mutauro Mhinganidzo:
Porziņģis aive nedambudziko rekutora mutauro muSeville. Ndichiri kutamba timu yejunior mumwaka wake wekutanga, akatambura kutaura nevadzidzi vake uye nevarairidzi. Nekuda kweizvozvo, akazengurira nekunzwa kwekudzokera kumhuri yake mushure mekuyedza kwake kwekutanga.
Mukuratidzira kwekufarira, Porziņģis akapa matare maviri ebhasikiti kuguta rake rekuzvarwa, iro risina kana chakaipa mukuzvishambadza pacharo senzvimbo yekuzvarwa yeLegend yavo.
Kristaps Porzingis Achifumura Chirongwa Chitsva Chipo kwaakapa madhora mazana mashanu.
Chokwadi # 4: Zvepabonde Kushungurudzwa Nhau:
Muna Kurume 2019, zvakazivikanwa kuti mukadzi akapomera Porziņģis chibharo. Mukadzi anonzi akaudza mapurisa kuti akamirira rinopfuura gore kuti auye kumberi sezvo anga ataura nezvekubhadharwa kubva kuPorziņģis kuvhara muromo wake.
Zvisinei, gweta raPorziņģis rakaramba pachena chikumbiro ichi ndokuendesa nyaya yacho kuvakuru vehurumende. Zvinoenderana NY Post, Kristaps Porzingis akadana mukadzi mutema 'muranda wangu' sezvaaimurova nekumubata chibharo.
Chokwadi # 5: Nziyo dzeLatvia rap dzakanyorwa nezvake:
Uya nemunhu akakurumbira muLatvia, iyo rap duo Transleiteris yakaburitswa. "#PORZINGIS" ine vhidhiyo ine inopfuura miriyoni imwe yakarova paYouTube.
Rimwe boka rainzi Olas rakaburitsawo rwiyo rwunonzi "Ramba Wakadzikama SaKristaps. Porzingis. ” Idzi nziyo dzinopa ratidziro inokatyamadza mune yechiLatvia tsika yechiitiko.
Chokwadi # 6: Kuputsa mutauro weChirungu Mhinganidzo:
Porzingis akadzidza Chirungu kubva pakuona mafirimu eAmerica achiri mudiki, muchokwadi, mafirimu matatu pakudzokorora: Chishanu, Kudya Kwemanheru KwaSchmucks, naJohn Wick.
"UNOGONA KUTARIRA BHAIBHERI NGUVA YEKUTANGA UYE USINA KUNZWISISA CHINHU," PORZINGIS AKAGADZIRA MUGQI Bvunzurudzo. “WOZVIZVIWEDZERA UCHITARISIRA PASI UCHITANGA KUNZWISISA ZVAKAWANDA UYE ZVAKAWANDA, NDIZVO ZVANDINODZIDZA SHONA. Neniwo NDINOFANIRA MUMHANZI. ”
Porzingis akati shanduko kuChirungu tsika yaive nyore, kunze kwekubatwa ruoko kweAmerica kunosanganisira kukwazisana kwachichinjirwa mukumbundira, kusanganisira kudzoka kuruoko.
Chokwadi # 8: Nezve ake Nicknamames:
Kudzoka mumazuva, Porzingis akaenda nemoniker "Zinger" uye izvi haana kuzvifarira kusvika Kevin Durant yakamupa yakakwana "Unicorn".
“Anogona kupfura zvakanaka uye kuita mitambo chaiyo. Anokwanisa kudzivirira, ane tsoka-nhanhatu anokwanisa kupfura nzira yose kuenda kumutsara wematanho matatu, ”akadaro Durant. “Hazviwanzoitika. Zvakare, anovharira pfuti zvakanaka, uye izvi zvakafanana nekuva nenyuchi muligi. ”
Kutenderedza kumusoro Kristaps Porzingis Biography uye Yehucheche Nhau, isu tinosvika pakuona iyo hombe mhedzisiro yekuzivisa yako kurota nekukasira zvakakwana.
Talis Porzingis akawana tarenda remwanakomana wake. Amai vake, Ingrīda Porziņģe, vakashandisa ruzivo rwake rwekare kuti vamubatsire mumutambo. Zvakare, vanun'una vake Jānis naMartins Porzingis vakatenderera kuti vatsigire hama yavo ine tarenda.
Pasina kupokana, kushingairira uye kutsunga kunounza mabudiro. Sezvandinonyora, Mavs achatengesa chero munhu, asinganzi Kristaps Porzingis, saka vanogona kuchengeta kwavo kuwedzera.
Mukati mekunyora iyi memoir, isu takaona kuti kuve nehukama-hwakarukwa nyaya dzemumba. Kristaps Porzingis vabereki nehama vakakurudzira kubudirira muhupenyu hwake kubva pakutanga.
Sezuva ranhasi, iyi mhuri yeLatvia inokohwa michero yebasa ravo. Kunyangwe, izvi zviri kuitika sezvavanotarisira kuti hapana yakaipa nyaya NYPD yekuongorora kwake kubatwa chibharo.
Zvese zvinhu zvakatariswa, isu tinotenda iwe wawana izvi kunyora-up paKristaps Porzingis Bio inofadza uye inojekesa.
Ita zvakanaka kugovana ruzivo rwako nesu kuburikidza nechikamu chekutaura, kunyangwe isu tichikuvimbisa iwe hwakawanda nhoroondo dzehupenyu European Basketball Vatambi. Kuti uwane kukurumidza kuona chimiro ichi, shandisa nemutsa Wiki Tafura.
Kristaps Porziņģis Bio Dhata
Yakazara Nme: Kristaps Talisovich Porzingis
Zita rekudanwa: Kristaps Porziņģis
Zuva rekuzvarwa: 2nd Nyamavhuvhu, 1995
Age: Makore makumi maviri nemwedzi gumi neimwe.
Nzvimbo yekuzvarirwa: Liepaja, Latvia
Baba: Tālis Porziņģis
Amai: Ingrida Porziņģe
Vanun'una: Janis Porziņģis naMartins Porziņģis
Hobbies: Kutamba nekutarisa nhabvu
Hurefu: 7 ft 3 mu (2.21 m)
Simba kumberi / Center
$ Miriyoni 24.5
$ Miriyoni 60
Instagram (@kpzee) uye Twitter (@kpzee)